ရှမ်းပြည်နယ် ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ဦးစီးတည်ထောင်သူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓသာသနာပြု အောက်စဖို့ဒ်ဆရာတော် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဓမ္မသာမိ <!-[if Webkit]> <!-[if Konq]> <!-[if Opera]>
အောက်စ်ဖို့ဒ်ဆရာတော် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဓမ္မသာမိ
ရှမ်းပြည်နယ် ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ဦးစီးတည်ထောင်သူ
ရန်ကုန်မြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များ အသင်းကြီး ကို တည်ထောင်သူ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များ အသင်းကြီး ကို တည်ထောင်သူ (ATBU)
အလုပ်ခွင်မှာ ၆-မိနစ် တရားထိုင်မယ်
၉-၁-၂၀၁၈ အလုပ်ခွင်မှာတရားထိုင်မယ် (ကြာချိန် ၁၃-မိနစ်)
၂၆.၂.၂၀၁၉ OBVS ဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားလက်ဆောင် (Singapore BigBox) (အစ/အဆုံး)
၂၆.၂.၂၀၁၉ OBVS ဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားလက်ဆောင် (Singapore BigBox) (တရားအကျဉ်းချုပ်ဘာသာပြန် အင်္ဂလိပ်/မြန်မာ)
၂၆.၂.၂၀၁၉ OBVS ဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး အနုမောဒနာသြ၀ါဒ (OBVS) (အစ/အဆုံး)
၂၆.၂.၂၀၁၉ OBVS ဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး အနုမောဒနာသြ၀ါဒ (OBVS) (တရားအကျဉ်းချုပ်ဘာသာပြန် အင်္ဂလိပ်/မြန်မာ)
၁.၂.၂၀၁၉ ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ � Interdependent
၁.၂.၂၀၁၉ အလုပ်ခွင်ပျော်ရွှင်မှု နဲ့ ဘ၀ပျော်ရွှင်မှု အပိုင်း (၁)
၁.၂.၂၀၁၉ အလုပ်ခွင်ပျော်ရွှင်မှု နဲ့ ဘ၀ပျော်ရွှင်မှု အပိုင်း (၂)
၃၀.၁.၂၀၁၉ (၁) ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့် ဦးနှောက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံကပြောတဲ့ မိမိနှလုံးသားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ငြိမ်းချမ်းရေး
၃၀.၁.၂၀၁၉ (၂) ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့် ဦးနှောက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံကပြောတဲ့ မိမိနှလုံးသားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ငြိမ်းချမ်းရေး
၂၉.၁.၂၀၁၉ ပျော်ရွှင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ် မုဒိတာဆိုတဲ့အကျင့် (ကယား)
၂၄.၁.၂၀၁၉ နိဗ္ဗာနဿပစ္စယောရဲ့ အကောင်းမြင်ဝါဒ (မြစ်ကြီးနား)
၂၄.၁.၂၀၁၉ သတိပဋ္ဌာန်ဖြင့်စိတ်ခံစားမှုမြှင့်တင်ရေး သင်တန်း Mindfulness-based E.Q Development Workshop (မြစ်ကြီးနား)
၂၃.၁.၂၀၁၉ ရွှံ့ညွှန့်ထဲက ကြာပန်း � Lotus in the Mud (၀ိုင်းမော်မြို့) (ရှမ်းဘာသာ + မြန်မာ)
၂၂.၁.၂၀၁၉ (ညနေ)အနောက်တိုင်းက ပေါ်ပြူလာ သတိပဋ္ဌာန် (နမ္မတီး)(ရှမ်းဘာသာ + မြန်မာ)
၂၂.၁.၂၀၁၉ (နံနက်) အတိတ်က မုဒိတာ စွမ်းအား The Joyful Power of the Past (မိုးကောင်း)
၂၁.၁.၂၀၁၉ စိတ်လှုပ်ရှားမှုမလိုအပ်တဲ့ ပီတိ Joy Without Excitement ( မိုးကောင်း)
၂၁.၁.၂၀၁၉ သိပ္ပံပညာရှင်မျာျးရေးသားသောသတိပဋ္ဌာန် Mindfulness among Contemporary Scientistics (မိုးညှင်းဒီဂရီကောလိပ်)
၂၀.၁.၂၀၁၉ မုဒိတာ � မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စား (မိုးညှင်းမြို့)
၁၉.၁.၂၀၁၉ ဩကာသကန်တော့ချိုးထဲက ရတနာကို တူးဖော်ခြင်း
၁၈.၁.၂၀၁၉ အများအတွက်တွေးရင် အသက်ရှည်မယ် (ဖားကန့်)
၁၇.၁.၂၀၁၉ နေ့စဉ်အသုံးပြုကရုဏာ (မြစ်ကြီးနား)
၁၆.၁.၂၀၁၉ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားကဏ္ဍတွင် သတိပဋ္ဌာန်အခြေခံသော စိတ်ခံစားမှုဖွံ့ဖြိုးရေး Mindfulness based Emotion Management in Health and Sport (နေပြည်တော်)
၁၆.၁.၂၀၁၉ သတိပဋ္ဌာန်ရှုဒေါင့်မှ ဥပဒေနှင့် စိတ်ခံစားမှုကို သုံးသပ်ခြင်း (၁) Mindfulness Law and Emotion (နေပြည်တော်)
၁၆.၁.၂၀၁၉ သတိပဋ္ဌာန်ရှုဒေါင့်မှ ဥပဒေနှင့် စိတ်ခံစားမှုကို သုံးသပ်ခြင်း (၂) Mindfulness Law and Emotion (နေပြည်တော်)
၁၅.၁.၂၀၁၉ ဒုက္ခနားလည်မှ တကယ်ရန်ကင်းတယ် � Safe When Problem Is Understood
၉.၁.၂၀၁၉ ကိုရင်လေးများအတွက် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှုများ - Emotion Management in Novice Training
၈.၁.၂၀၁၉ အိမ်ကိုတောင်မှ ကျောင်းကဲ့သို့ဆောက်ပါ - Build Your Home As A Temple
၇.၁.၂၀၁၉ လူသူကြားထဲ အဝင်ဆန့်အောင်လုပ်ကြရတော့ (မန္တလေး)
၆.၁.၂၀၁၉ ကရုဏာဆေးစွမ်းကောင်း Compassion is Healing
၆.၁.၂၀၁၉ နေ့စဉ်အသုံးချ သစ္စာလေးပါး Four Nobel Truth for Daily Life
၆.၁.၂၀၁၉ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းများကို တီထွင်ဖန်တီးခြင်း Engineering Positive Emotion (၁)
၆.၁.၂၀၁၉ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းများကို တီထွင်ဖန်တီးခြင်း Engineering Positive Emotion (၂)
၆.၁.၂၀၁၉ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းများကို တီထွင်ဖန်တီးခြင်း Engineering Positive Emotion (၃)
၇.၁.၂၀၁၉ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းများကို တီထွင်ဖန်တီးခြင်း Engineering Positive Emotion (၄)
၇.၁.၂၀၁၉ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းများကို တီထွင်ဖန်တီးခြင်း Engineering Positive Emotion (၅)
၁.၁.၂၀၁၉ နေ့စဉ်အသုံးချ ဓမ္မစကြာ (၁) The Wheel of Truth for Daily Life
၁.၁.၂၀၁၉ နေ့စဉ်အသုံးချ ဓမ္မစကြာ (၂) The Wheel of Truth for Daily Life
၃၁.၁၂.၂၀၁၈ နေ့စဉ်ဘဝမှာ တူးယူပန်ဆင်နိုင်တဲ့ ရတနာ Treasure Avalianle to You in Daily Life
၂၉.၁၂.၂၀၁၈ အများအတွက် တွေးတောပေးခြင်းနှင့်အကောင်းမြင်စိတ္တဗေဒ Altruism and Positive Psychology
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ နှင့် အကောင်းမြင်ဝါဒ Buddhist Worldview and Positive Thinking
၂၆.၁၂.၂၀၁၈ သတိပဋ္ဌာန်အခြေခံသော စိတ်ခံစားမှုမြှင့်တင်ရေး နှင့် ပညာရေး � Mindfulness Emotion Managment and Education
၂၆.၁၂.၂၀၁၈ (2) EQ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သတိပဋ္ဌာန်တရား � EQ Development and Mindfulness Meditation
26.12.2018 (1) EQ Development and Mindfulness Meditation (English)
၂၄.၁၂.၂၀၁၈ သတိပဋ္ဌာန်သုတ်လာ စ်ိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ကျင့်စဉ်များ
၂၃.၁၂.၂၀၁၈ အကောင်းမြင်ဝါဒနှင့် သမ္မာဝါစာတို့၏ ပါရမီ
၂၂.၁၂.၂၀၁၈ နမော်နမဲ့များ၏ နတ်ဒေ၀ါ
၁၉.၁၂.၂၀၁၈ စိတ်ခံစားမှု အစာမကြေသည့်အတိတ် - Undigested Past
၁၉.၁၂.၂၀၁၈ အနောက်တိုင်းသိပ္ပံပညာရှင်များ ဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့ သတိပဋ္ဌာန် - Mindfulness Pracrice Among Western Scientists
၁၈.၁၂.၂၀၁၈ စီးပွားရေးလောကထဲက ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန် မာယာ (၁) - The illusion of seaparateness in the business world
၁၈.၁၂.၂၀၁၈ စီးပွားရေးလောကထဲက ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန် မာယာ (၂) - The illusion of seaparateness in the business world
၁၈.၁၂.၂၀၁၈ စီးပွားရေးလောကထဲက ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန် မာယာ (၃) - The illusion of seaparateness in the business world
၁၇.၁၂.၂၀၁၈ စားနိုင်တာထက်ပို ကိုက်မိကြတဲ့ စိတ်ခံစားမှုအစားအစာ - Emotion we bite more than we can chew
8.12.2018 Mindfulness and Stress Management (English)
၇.၁၂.၂၀၁၈ လေးနက်စွာနားစွင့်ခြင်း နှင့် စိတ်ထားမျှတစွာ လေ့လာနိုင်ခြင်း (၁)
၇.၁၂.၂၀၁၈ လေးနက်စွာနားစွင့်ခြင်း နှင့် စိတ်ထားမျှတစွာ လေ့လာနိုင်ခြင်း (၂)
၇.၁၂.၂၀၁၈ လေးနက်စွာနားစွင့်ခြင်း နှင့် စိတ်ထားမျှတစွာ လေ့လာနိုင်ခြင်း (၃)
၆.၁၂.၂၀၁၈ စိတ်ဖိစီးမှုကိုကိုင်တွယ်ရန် ကရုဏာနှင့် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းရည် (၁) - Compassion and Resilience in Stress Management
၆.၁၂.၂၀၁၈ စိတ်ဖိစီးမှုကိုကိုင်တွယ်ရန် ကရုဏာနှင့် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းရည် (၂) - Compassion and Resilience in Stress Management
၆.၁၂.၂၀၁၈ စိတ်ဖိစီးမှုကိုကိုင်တွယ်ရန် ကရုဏာနှင့် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းရည် (၃) - Compassion and Resilience in Stress Management
2.12.2018 Dhamma Discussion with Kids (Grade3to 5) (Yangon)
2.12.2018 Dhamma Discussion with Kids (Grade6to 8) (Yangon)
2.12.2018 Dhamma Discussion with Kids (Grade9to 10) (Yangon)
၁.၁၂.၂၀၁၈အကောင်းမြင်ဝါဒက အားနည်းချက်လား? Is Positive ThinkingaWeakness?
၁.၁၂.၂၀၁၈ သင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဗုဒ္ဓ၏ ဦးနှောက်အတွေးအခေါ်များ (၁) (Buddha Brain for You and Me)
၁.၁၂.၂၀၁၈ သင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဗုဒ္ဓ၏ ဦးနှောက်အတွေးအခေါ်များ (၂) (Buddha Brain for You and Me)
၃၀.၁၁.၂၀၁၈ အလုပ်မှာပျော်ရွှင်နိုင်မှ ဘဝအောင်မြင်မည် � Life Truly Succeeds only throught Job Satisfaction
၂၈.၁၁.၂၀၁၈ အလုပ်ကများအလုပ်ကရှား သြ၀ါဒတရားတော် (သီရိလင်္ကာ)
၂၄.၁၁.၂၀၁၈ အနှိုင်းမဲ့ဆရာမြတ်၏ အတိုင်းမဲ့ကရုဏာ - Boundless Compassion of Incomparable Teacher
၂၃.၁၁.၂၀၁၈ စိတ်ခံစားမှုအလှ -The Beauty of Emotion
၂၂.၁၁.၂၀၁၈ ပါရမီဆယ်ပါးတရားတော် - ၀ိဇာတမွေးနေ့ အထူးတရားသင်တန်း
၂၂.၁၁.၂၀၁၈ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ပါရမီဆယ်ပါးဘုရားရှိခိုး
၁၃-၁၁.၂၀၁၈ အောက်စဖို့ဒ်ဆရာတော်ဝိဇာတမွေးနေ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး မေတ္တာပို့ နှင့် တရားတော်မြန်မာဘာသာပြန်
၁၃-၁၁-၂၀၁၈ အောက်စဖို့ဒ်ဆရာတော်ဝိဇာတမွေးနေ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီးအထူးဓမ္မသဘင် (ရှမ်းဘာသာ + မြန်မာဘာသာ)
၁၅.၁၁.၂၀၁၈ ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ အနုမောဒနာတရားတော်
၁၄.၁၁.၂၀၁၈ အလှူရှင်များ ဂုဏ်ပြုလွှာပေးအပ်ပွဲ အနုမောဒနာတရားတော်
၁၄.၁၁.၂၀၁၈ နေ့လည် ဝိဇာတမွေးနေ့ အထူးဓမ္မသဘင် အနုမောဒနာတရားတော်
၁၄.၁၁.၂၀၁၈ နံနက် ဝိဇာတမွေးနေ့ အနုမောဒနာတရားတော်
၉.၁၁.၂၀၁၈ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကထိန်အစဉ်အလာမှ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ သွန်သင်မှုများ
၅.၁၀.၂၀၁၈ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အကောင်းမြင်ဝါဒ (The Buddha Positive Thinking) (USA)
၃.၁၀.၂၀၁၈ မိမိကိုယ်လည်းဂုဏ်ယူပါ သူတစ်ပါးကိုလည်းဂုဏ်ယူပါ (Be Proud of Yourself and More) (USA)
၁.၁၀.၂၀၁၈ တရားဆွေးနွေးခြင်း (USA)
၁၈.၈.၂၀၁၈ ဝါဆိုသင်္ကန်းလှူဒါန်းရသည့် သဘောထားအမြင်
၁၈-၇-၂၀၁၈ ဓမ္မစကြာမှသင်ကြားပေးသော ကရုဏာတုန့်ပြန်မှု - Compassionate Response in The Dhammacakka Teaching (Eng + Myanmar)
၁၅.၇.၂၀၁၈ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး မေတ္တာခံယူခြင်း နှင့် ဓမ္မဘသင် (စင်္ကာပူ)(စ/ဆုံး ကြာချိန် 3:37 hr)
၁၅.၇.၂၀၁၈ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားတော် ဘာသာပြန် (စင်္ကာပူ)(မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်)
၁၅.၇.၂၀၁၈ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားပန်းချီ ဘာသာပြန် (စင်္ကာပူ)(အင်္ဂလိပ်)
၁၂.၇.၂၀၁၈ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး မေတ္တာခံယူခြင်း နှင့် ဓမ္မဘသင် (စင်္ကာပူ)(စ/ဆုံး ကြာချိန် 1:44 hr)
၁၂.၇.၂၀၁၈ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားတော် ဘာသာပြန် (မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်) (စင်္ကာပူ)
၁၁.၇.၂၀၁၈ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားလက်ဆောင် ဆုံးမသြ၀ါဒနှင့်မေတ္တာပို့ (စင်္ကာပူ)
၁၁.၇.၂၀၁၈ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားတော် ဘာသာပြန် (စင်္ကာပူ)(မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်)
၁၁.၇.၂၀၁၈ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားပန်းချီ ဘာသာပြန်(စင်္ကာပူ)(မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်)
၁၁.၇.၂၀၁၈ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားတော်နှင့်မေတ္တာသြဝါဒခံယူခြင်း (စင်္ကာပူ)(စ/ဆုံး ကြာချိန် 2:54 hr)
မင်္ဂလသုတ်တော်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း � An Overview of the concept of Blessing in Buddhism � Mangala Sutta
22.6.2018 The Underestimated Power of Compassion as Attitude in Daily Life (Germany Berlin)
၂၁.၆.၂၀၁၈ စိတ်ဖိစီးမှု ဒုက္ခကို အကောင်းမြင်ဝါဒ ဖြင့် ရင်ဆိုင်ခြင်း � Managing Daily Stress with Positive Outlook ( ဂျာမနီ)
၁၅.၆.၂၀၁၈ ဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ပညာနှင့် အီးကျူ ဖွံ့ဖြိုးရေး (၁) - Buddhist Psychology and E.Q Enhancement
၁၅.၆.၂၀၁၈ ဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ပညာနှင့် အီးကျူ ဖွံ့ဖြိုးရေး (၂) - Buddhist Psychology and E.Q Enhancement
၁၅.၆.၂၀၁၈ ဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ပညာနှင့် အီးကျူ ဖွံ့ဖြိုးရေး (၃) - Buddhist Psychology and E.Q Enhancement
၁၄.၆.၂၀၁၈ အချင်းချင်းတည်မှီရတဲ့ လူ့လောကအတွက်ရှိကိုရှိရမည့်သတိအခြေခံကရုဏာ (၁) � Mindful Compassion for the Interconnected World
၁၄.၆.၂၀၁၈ အချင်းချင်းတည်မှီရတဲ့ လူ့လောကအတွက်ရှိကိုရှိရမည့်သတိအခြေခံကရုဏာ (၂) � Mindful Compassion for the Interconnected World
၁၄.၆.၂၀၁၈ အချင်းချင်းတည်မှီရတဲ့ လူ့လောကအတွက်ရှိကိုရှိရမည့်သတိအခြေခံကရုဏာ (၃) � Mindful Compassion for the Interconnected World
၁၃.၆.၂၀၁၈ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိတဲ့ သတိပဋ္ဌာန်အခြေခံ ကရုဏာ-မုဒိတာဆေး - Mindful Compassion and Joy As Side-effect-free Medicine
၁၃.၆.၂၀၁၈ စိတ်ခံစားမှုကိုလေ့ကျင့်ပေးနိုင်သည် - Emotion can be Trained
၁၂.၆.၂၀၁၈ ပျော်ရွှင်ခြင်းကို တည်ဆောက်ပေးနိုင်သော ကြံကြံ့ခံနိုင်မှု (၁) � Resilience Engineers Happiness
၁၂.၆.၂၀၁၈ ပျော်ရွှင်ခြင်းကို တည်ဆောက်ပေးနိုင်သော ကြံကြံ့ခံနိုင်မှု (၂) � Resilience Engineers Happiness
၁၂.၆.၂၀၁၈ ပျော်ရွှင်ခြင်းကို တည်ဆောက်ပေးနိုင်သော ကြံကြံ့ခံနိုင်မှု (၃) � Resilience Engineers Happiness
11.6.2018 Mindful Compassion As The Engineering Instrument For Resilience
၇.၆.၂၀၁၈ သတိပဋ္ဌာန်န်အခြေခံ ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေး ဒဿန (၁) � Mindfulness-Based Buddhist Education Philosophy
၇.၆.၂၀၁၈ သတိပဋ္ဌာန်န်အခြေခံ ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေး ဒဿန (၂) � Mindfulness-Based Buddhist Education Philosophy
၇.၆.၂၀၁၈ သတိပဋ္ဌာန်န်အခြေခံ ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေး ဒဿန (၃) � Mindfulness-Based Buddhist Education Philosophy
၆.၆.၂၀၁၈ မင်တစ်စက်ရဲ့ မုဒိတာစွမ်းအား (၁) � A Joyful Power of One Dot
၆.၆.၂၀၁၈ မင်တစ်စက်ရဲ့ မုဒိတာစွမ်းအား (၂) � A Joyful Power of One Dot
၆.၆.၂၀၁၈ မင်တစ်စက်ရဲ့ မုဒိတာစွမ်းအား (၃) � A Joyful Power of One Dot
၅.၆.၂၀၁၈ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာအစဉ်အလာ(၁) - A Joyful Buddhist Tradition of the Administrators
၅.၆.၂၀၁၈ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာအစဉ်အလာ(၂) - A Joyful Buddhist Tradition of the Administrators
၅.၆.၂၀၁၈ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာအစဉ်အလာ (၃) - A Joyful Buddhist Tradition of the Administrators
၄.၆.၂၀၁၈ ကရုဏာဖြင့် ပညာသို့သွားရာလမ်း (၁) - Compassion Constructs The Road to Wisdom
၄.၆.၂၀၁၈ ကရုဏာဖြင့် ပညာသို့သွားရာလမ်း (၂) - Compassion Constructs The Road to Wisdom
၄.၆.၂၀၁၈ ကရုဏာဖြင့် ပညာသို့သွားရာလမ်း (၃) - Compassion Constructs The Road to Wisdom
၃.၆.၂၀၁၈ စုပေါင်းလုံ့လ သမဝါယမအတွက် သတိပဌာန် အခြေခံသောကရုဏာ (၁) � Mindful Compassion As The Basic of Cooperative Motivation
၃.၆.၂၀၁၈ စုပေါင်းလုံ့လ သမဝါယမအတွက် သတိပဌာန် အခြေခံသောကရုဏာ (၂) � Mindful Compassion As The Basic of Cooperative Motivation
၃.၆.၂၀၁၈ စုပေါင်းလုံ့လ သမဝါယမအတွက် သတိပဌာန် အခြေခံသောကရုဏာ (၃) � Mindful Compassion As The Basic of Cooperative Motivation
၁.၆.၂၀၁၈ တို့လူသားများ ဒီထက်ပိုစွမ်းတယ် (၁) � Human Beings are more capable than this
၁.၆.၂၀၁၈ တို့လူသားများ ဒီထက်ပိုစွမ်းတယ် (၂) - Human Beings are more capable than this
၁.၆.၂၀၁၈ တို့လူသားများ ဒီထက်ပိုစွမ်းတယ် (၃) - Human Beings are more capable than this
၃၁.၅.၂၀၁၈ နေ့စဉ်အသုံးချ ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင် (၁) - Applied Dhamma Attitude in Daily Life
၃၁.၅.၂၀၁၈ နေ့စဉ်အသုံးချ ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင် (၂) - Applied Dhamma Attitude in Daily Life
၃၀.၅.၂၀၁၈ သတိပဋ္ဌာန်ဖြင့်မိမိနှင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးနက်စွာ နားစွင့်ခြင်း (၁) � Mindful Deep Listening to Yourself and Your Environment
၃၀.၅.၂၀၁၈ သတိပဋ္ဌာန်ဖြင့်မိမိနှင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးနက်စွာ နားစွင့်ခြင်း (၂) � Mindful Deep Listening to Yourself and Your Environment
၃၀.၅.၂၀၁၈ သတိပဋ္ဌာန်ဖြင့်မိမိနှင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးနက်စွာ နားစွင့်ခြင်း (၃) � Mindful Deep Listening to Yourself and Your Environment
၂၉.၅.၂၀၁၈ အရှေ့နှင့်အနောက်တိုင်းကြား တန်ဖိုးများညှိနှိုင်းပေးတဲ့မဇ္ဈိမပဋိပဒါ (၁) � The Middle Way Medium between The Two Value Systems
၂၉.၅.၂၀၁၈ အရှေ့နှင့်အနောက်တိုင်းကြား တန်ဖိုးများညှိနှိုင်းပေးတဲ့မဇ္ဈိမပဋိပဒါ (၂) � The Middle Way Medium between The Two Value Systems
၂၈.၅.၂၀၁၈ တိုးတက်မှုတစ်ခုရဲ့ ရှုဒေါင့်သုံးခု - Three Aspects of One Development တရားတော်
၁၀.၅.၂၀၁၈ ညနေခင်းဩဝါဒ မိန့်ကြားပေးခြင်း (ရတနာပန်းကုံး ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်ကြီး)
၁၀.၅.၂၀၁၈ အကောင်းမြင်တတ်လျှင် ဆေးဖြစ်သည် - Positive Outlook as Medicine
၁၆-၃-၂၀၁၈ စီးပွားရေး လောက၏ စိတ်ဖိစီးမှုဒါဏ်ရာကို အသိဉာဏ်ပညာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း � Transforming Stress into Wisdom for the Business People
၁၁-၃-၂၀၁၈ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုနှင့် သတိပဌာန်အခြေခံ ကရုဏာတရား (၁) � Mindful Compassion and Resilience for Business
၁၁-၃-၂၀၁၈ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုနှင့် သတိပဌာန်အခြေခံ ကရုဏာတရား (၂) � Mindful Compassion and Resilience for Business
7.3.2018 Strategy Thinking (1)
7.3.2018 Strategy Thinking (2)
7.3.2018 Strategy Thinking (3)
6.3.2018 သတိ၊ ကရုဏာဖြင့်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲခြင်း (၁) - Mindful Compassion for Adaptability
6.3.2018 သတိ၊ ကရုဏာဖြင့်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲခြင်း (၂) - Mindful Compassion for Adaptability
6.3.2018 သတိ၊ ကရုဏာဖြင့်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲခြင်း (၃) - Mindful Compassion for Adaptability
5.3.2018 Special Lecture by English on Student-Centered Learning (ITBMU)
၄.၃.၂၀၁၈ Mindfulness for Organization and Development (၁) (ရန်ကုန်)
၄.၃.၂၀၁၈ Mindfulness for Organization and Development (၂) (ရန်ကုန်)
၄.၃.၂၀၁၈ Mindfulness for Organization and Development (၃) (ရန်ကုန်)
၃.၃.၂၀၁၈ သြဝါဒအနုမောဒနာတရားတော် (SSBU)
၂၇.၂.၂၀၁၈ စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးတွန်းအား ကရုဏာတရား (၁) � Compassion as motive for Business and Development (ရန်ကုန်)
၂၇.၂.၂၀၁၈ စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးတွန်းအား ကရုဏာတရား (၂) � Compassion as motive for Business and Development (ရန်ကုန်)
၂၆.၂.၂၀၁၈ ဓမ္မစကြာထဲက စိတ်ခံစားမှုကိုင်တွယ်နည်း - Emotion Management in Dhammacakkara ( ရတနာပုံတက္ကသိုလ်)
၂၄.၂.၂၀၁၈ အလုပ်ကများ အလုပ်ကရှား (သကျဓီတာသီလရှင်စာသင်တိုက်)
၂၄.၂.၂၀၁၈ အလုပ်ခွင်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရေး ကရုဏာရဲ့တန်ဖိုး (၁) � The Value of Compassion in Stress Management in Workplace (1)
၂၄.၂.၂၀၁၈ အလုပ်ခွင်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရေး ကရုဏာရဲ့တန်ဖိုး (၂) � The Value of Compassion in Stress Management in Workplace (2)
၂၅.၂.၂၀၁၈ အလုပ်ခွင်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရေး ကရုဏာရဲ့တန်ဖိုး (၃) � The Value of Compassion in Stress Management in Workplace (3)
၂၅.၂.၂၀၁၈ အလုပ်ခွင်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရေး ကရုဏာရဲ့တန်ဖိုး (၄) � The Value of Compassion in Stress Management in Workplace(4)
၂၅.၂.၂၀၁၈ အလုပ်ခွင်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရေး ကရုဏာရဲ့တန်ဖိုး (၅) � The Value of Compassion in Stress Management in Workplace (5)
၂၅.၂.၂၀၁၈ အလုပ်ခွင်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရေး ကရုဏာရဲ့တန်ဖိုး (၆) � The Value of Compassion in Stress Management in Workplace(6)
၂၃.၂.၂၀၁၈ ဘာသာစကားထဲက စိတ်ခံစားမှုများ � The Influence of Emotion in Languages (MUFL)
၂၃.၂.၂၀၁၈ တရားထိုင်ခြင်းဖြင့် အသိနှင့်စိတ်ခံစားမှုစွမ်းရည်တိုးမြှင့်စေရေး � Buddhist Meditation as Cognitive and E.Q Development Program (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် မန္တလေး)
၁၈.၂.၂၀၁၈ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးအတွက် EQ နှင့် အကောင်းမြင်ဝါဒ တရားတော် (၁) � E.Q and Positive Thinking in International Relations (1)
၁၈.၂.၂၀၁၈ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးအတွက် EQ နှင့် အကောင်းမြင်ဝါဒ တရားတော် (၂) � E.Q and Positive Thinking in International Relations (2)
၁၈.၂.၂၀၁၈ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးအတွက် EQ နှင့် အကောင်းမြင်ဝါဒ တရားတော် (၃) � E.Q and Positive Thinking in International Relations (3)
၇.၂.၂၀၁၈ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး ထံမှ ဩဝါဒခံယူခြင်းနှင့် ပရိတ်တရားတော်များ နာယူကြည်ညိုခြင်း
( မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးသြ၀ါဒကို ဆရာတော်ဓမ္မသာမိမှ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်သာသာပြန်ပေးထာတာလည်း ပါရှိပါသည်။ တရားတော်ကြာချိန် ၂နာရီ၃၅မိနစ်)
၇.၂.၂၀၁၈ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးသြ၀ါဒကို ဆရာတော်ဓမ္မသာမိ မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်သီးသန့်တရားတော်
၅.၂.၂၀၁၈ အားကျမခံစိတ်ကို အဘိဓမ္မာရှုဒေါင့်မှ သုံးသပ်ခြင်း � Analysis of competitive mind habit as motivator
၃၁.၁.၂၀၁၈ ရင်ထဲမှာတည်ဆောက်ရတဲ့ ရတနာစေတီ � The Treasure Pagoda Enshrined in Your Hear
၃၁.၁.၂၀၁၈ အဆက်စပ်သိပါစေ တရားတော် (၁)
၃၁.၁.၂၀၁၈ အဆက်စပ်သိပါစေ တရားတော် (၂)
၂၉.၁.၂၀၁၈ မိမိစိတ်ခံစားမှု အထူးသတိပြု Mindfulness of Our Own Emotion
၂၆.၁.၂၀၁၈ လောကီ လောကုတ္တရာအကျိုးနှစ်မျိုးပါတဲ့ ပါရမီ (Buddhist Practices for Both Worldly Development and Nirvana)
၂၄.၁.၂၀၁၈ စိတ်ခံစားမှုအသိဉာဏ်ဘာကြောင့် မရှိမဖြစ် အရေးပါ Why Emotional Intelligence is Vital (တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်)
၂၃.၁.၂၀၁၈ နေရာတိုင်းမှာ ဦးဆောင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှု � Emotion that leads everywhere
၂၂.၁.၂၀၁၈ နေ့စဉ်အသက်ရှုဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ကရုဏာနဲ့ မုဒိတာ အောက်စီဂျင်
၂၂.၁.၂၀၁၈ An Introduction to Common Buddhist Text (တောင်ငူကေတုမတီသီတဂူဗုဒ္ဒတက္ကသိုလ်)
၂၁.၁.၂၀၁၈ နိဗ္ဗာနပစ္စယောဟောတု သဘောထားအမြင်
၁၈.၁.၂၀၁၈ ကရုဏာရှေ့ထားရင် စီးပွားရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသလား အပိုင်း(၁) � Is Compassion bad for Business? � Part 1
၁၈.၁.၂၀၁၈ ကရုဏာရှေ့ထားရင် စီးပွားရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသလား အပိုင်း(၂) � Is Compassion bad for Business? � Part 2
၁၇.၁.၂၀၁၈ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သတိပဌာန်အခြေခံစိတ်ခံစားမှုအသိဉာဏ် အပိုင်း(၁) � Mindfulness and Emotional Intelligence for Business People � Part1
၁၇.၁.၂၀၁၈ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သတိပဌာန်အခြေခံစိတ်ခံစားမှုအသိဉာဏ် အပိုင်း(၂) � Mindfulness and Emotional Intelligence for Business People � Part2
၁၁.၁.၂၀၁၈ ည ၇:၃၀ ဒုက္ခသစ္စာ ခလုတ်တိုက်မိတယ် (Stumbling on the Inconvenient Truths)
၁၁.၁.၂၀၁၈ ဓမ္မစကြာ University of Mandalay Buddha�s Teaching Class
၁၀.၁.၂၀၁၈ ဩကာသကန်တော့ချိုးနှင့် စိတ်ခံစားမှုဖွံ့ဖြိုးရေး (Awkatha Homage Recitation and Emotion Development)
၉.၁.၂၀၁၈ တွေ့ကိုတွေ့ရမည့် စိတ်ခံစားမှု လှိုင်းလုံးကြီးများ (The Inevitable Emotional Waves)
၈.၁.၂၀၁၈ သတိမပြုမိတဲ့ အဂတိအပြုအမူ � The Unnoticed Prejudice Yangon Eastern University
၈.၁.၂၀၁၈ ဩဝါဒပါတိမောက်တရား (တောင်ဥက္ကလာ)
ကရုဏာအခြေခံသောာ ပျော်ရွှင်မှု၏ စိန်ခေါ်မှုများ တရားသင်တန်း
၆.၁.၂၀၁၈ ကရုဏာအခြေခံသောာ ပျော်ရွှင်မှု၏ စိန်ခေါ်မှုများ တရားသင်တန်း (၁) (Challenges to the Compassion-based Happiness Part-1)
၆.၁.၂၀၁၈ ကရုဏာအခြေခံသောာ ပျော်ရွှင်မှု၏ စိန်ခေါ်မှုများ တရားသင်တန်း (၂) (Challenges to the Compassion-based Happiness Part-2)
၆.၁.၂၀၁၈ ကရုဏာအခြေခံသောာ ပျော်ရွှင်မှု၏ စိန်ခေါ်မှုများ တရားသင်တန်း (၃) (Challenges to the Compassion-based Happiness Part-3)
၇.၁.၂၀၁၈ ကရုဏာအခြေခံသောာ ပျော်ရွှင်မှု၏ စိန်ခေါ်မှုများ တရားသင်တန်း (၄) (Challenges to the Compassion-based Happiness Part-4)
၇.၁.၂၀၁၈ ကရုဏာအခြေခံသောာ ပျော်ရွှင်မှု၏ စိန်ခေါ်မှုများ တရားသင်တန်း (၅) (Challenges to the Compassion-based Happiness Part-5)
၇.၁.၂၀၁၈ ကရုဏာအခြေခံသောာ ပျော်ရွှင်မှု၏ စိန်ခေါ်မှုများ တရားသင်တန်း (၆) (Challenges to the Compassion-based Happiness Part-6)
၅.၁.၂၀၁၈ ကိုင်းကျွန်းမှီ -ကျွန်းကိုင်းမှီ (Interbeing)
၂.၁.၂၀၁၈ တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိသည် (In the eyes of the beholder)
၁.၁.၂၀၁၈ ကိုယ်ချင်းစာအတွေးများ၏မြစ်ဖျားခံရာ (The Source of Sympathic Thoughts)
၉-၁-၂၀၁၇ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ဆက်ဆံရေးအောင်မြင်စေဖို့သတိပဌာန်ဖြင့်စိတ်ခံစားမှုကိုင်တွယ်ခြင်း (ပထမနေ့)
၁၀-၁-၂၀၁၇ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ဆက်ဆံရေးအောင်မြင်စေဖို့သတိပဌာန်ဖြင့်စိတ်ခံစားမှုကိုင်တွယ်ခြင်း (ဒုတိယနေ့)
၁၀-၁-၂၀၁၇ အတိတ်က ခံစားမှုအရိပ်
၁၁-၁-၂၀၁၇ နင်လားဟဲ့ ဒုက္ခ
၁၁-၁-၂၀၁၇ အလုပ်ကများ အလုပ်ကရှား၊ ၂၁ ရာစု ပရိယတ္တိဆိုင်ရာ ဓမ္မသာကစ္ဆာ (ဓမ္မဒူတ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်)
၁၃-၁-၂၀၁၇ Super Emotion Market စိတ်ခံစားမှု ဈေးရုံကြီး
၁၆-၁-၂၀၁၇ အရေးပေါ်ဋ္ဌာနသည် အရေးပေါ်အတွက်သာ Emergency Room Is For Emergency Patient
၁၇-၁-၂၀၁၇ (ပထမပိုင်း) ဂရုဏာအသိမှ တည်ဆောက်ထားသော ပျော်ရွှင်မှု သတိပဋ္ဌာန်ဖြင့် စိတ်ခံစားမှုဖွံ့ဖြိုးရေး တရားပွဲသင်တန်း Compassion Engineers Happiness Emotion Management Through Mindfulness
၁၇-၁-၂၀၁၇ (ဒုတိယပိုင်း) ဂရုဏာအသိမှ တည်ဆောက်ထားသော ပျော်ရွှင်မှု သတိပဋ္ဌာန်ဖြင့် စိတ်ခံစားမှုဖွံ့ဖြိုးရေး တရားပွဲသင်တန်း Compassion Engineers Happiness Emotion Management Through Mindfulness
၁၇-၁-၂၀၁၇ (တတိယပိုင်း) ဂရုဏာအသိမှ တည်ဆောက်ထားသော ပျော်ရွှင်မှု သတိပဋ္ဌာန်ဖြင့် စိတ်ခံစားမှုဖွံ့ဖြိုးရေး တရားပွဲသင်တန်း Compassion Engineers Happiness Emotion Management Through Mindfulness
၁၈-၁-၂၀၁၇ (ပထမပိုင်း) ဂရုဏာအသိမှ တည်ဆောက်ထားသော ပျော်ရွှင်မှု သတိပဋ္ဌာန်ဖြင့် စိတ်ခံစားမှုဖွံ့ဖြိုးရေး တရားပွဲသင်တန်း Compassion Engineers Happiness Emotion Management Through Mindfulness
၁၈-၁-၂၀၁၇ (ဒုတိယပိုင်း) ဂရုဏာအသိမှ တည်ဆောက်ထားသော ပျော်ရွှင်မှု သတိပဋ္ဌာန်ဖြင့် စိတ်ခံစားမှုဖွံ့ဖြိုးရေး တရားပွဲသင်တန်း Compassion Engineers Happiness Emotion Management Through Mindfulness
၁၈-၁-၂၀၁၇ (တတိယပိုင်း) ဂရုဏာအသိမှ တည်ဆောက်ထားသော ပျော်ရွှင်မှု သတိပဋ္ဌာန်ဖြင့် စိတ်ခံစားမှုဖွံ့ဖြိုးရေး တရားပွဲသင်တန်း Compassion Engineers Happiness Emotion Management Through Mindfulness
၁၉-၁-၂၀၁၇ ဗုဒ္ဓဒဿနရူထောင့်မှသစ္စာနှင့်ဘဝ Truth and Life in Buddhist Philosophy
၂၀-၁-၂၀၁၇ မူလတန်ဖိုးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးကို ဗုဒ္ဓဒဿနရူ့တောင့်မှ သုံးသပ်ခြင်း Value and Culture in Buddhist Philosophy
20-1-2017 meeting with S$J community
6-2-2017 Reading Technique (စာဖတ်နည်း), Thematic Study(ခေါင်းစဉ်အလိုက်လေ့လာမှု), Textual Study (စာအုပ်အလိုက်လေ့လာမှု), Anatta
7-2-2017 Reading Technique (စာဖတ်နည်း), Thematic Study(ခေါင်းစဉ်အလိုက်လေ့လာမှု), Textual Study (စာအုပ်အလိုက်လေ့လာမှု), Anatta
8-2-2017 Study Skill, Bird eye's view, Worm eye's view
၂-၃-၂၀၁၇ ဓမ္မစင်္ကြာတရား သင်တန်း (ပထမပိုင်း) (ကလော)
၂-၃-၂၀၁၇ ဓမ္မစင်္ကြာတရား သင်တန်း (ဒုတိယပိုင်း) (ကလော)
၂-၃-၂၀၁၇ ဓမ္မစင်္ကြာတရား သင်တန်း (တတိယပိုင်း) (ကလော)
၅-၃-၂၀၁၇ မသိစိတ်နှင့် စိတ်ခံစားမှု၏ ဆွဲငင်အား Subconscious-Mind-and-Emotional-Gravity
8-3-2017 Teaching of Buddhist Meditation Practice in Simple Term
၁၁-၃-၂၀၁၇ (ပထမပိုင်း) ပြသနာတွေရဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို အခွင့်အလမ်းများအဖြစ် လက်ခံရင်ဆိုင်ပါ Embrace the challenges and take it as opportunities (Myanmar Idol)
၁၁-၃-၂၀၁၇ (ဒုတိယပိုင်း) ပြသနာတွေရဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို အခွင့်အလမ်းများအဖြစ် လက်ခံရင်ဆိုင်ပါ Embrace the challenges and take it as opportunities (Myanmar Idol)
၁၁-၃-၂၀၁၇ ပျော်နိုင်ပါရဲ့နဲ့ ပျော်ဖို့မေ့နေသူများ အပိုင်း (၂)
၁၃-၃-၂၁၀၇ Super Emotion Market (မြန်မာ)
၁၆-၃-၂၀၁၇ စာရိတ္တပညာနှင့် စိတ်ခံစားမှူအကြောင်း Ethics and Emotions (မန္တလေး)
၁၉-၃-၂၀၁၇ မာတာယထာ ဂရုဏာ တရားတော် The Compassion of Mother
၂၁-၅-၂၀၁၇ လက်ခံခြင်းနှင့်ငြင်းပယ်ခြင်းရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး (The burden of being accepted and rejected by the society) (Eng+Myan)
၂၅-၅-၂၀၁၇ ကိုယ့်လုပ်နိုင်တာနှင့်မလုပ်နိုင်တာ � What is in our hands and what is not in our hands (Eng+Myan)
၂၇-၅-၂၀၁၇ ပျော်ရွှင်မှုဒီနေရာ ဒီအချိန်မှာ ရှိနိုင်ပါတယ် � Happiness can be here and now (Eng+Myan)
၂၄-၆-၂၀၁၇ ဓမ္မစကြာ ဓမ္မအမေးအဖြေ (၁) (မဟာဗောဓိရုပ်သံလိုင်း)
၂၄-၆-၂၀၁၇ ဓမ္မစကြာ ဓမ္မအမေးအဖြေ (၂) (မဟာဗောဓိရုပ်သံလိုင်း)
၁၈-၇-၂၀၁၇ ကရုဏာ သတိရဲ့ အင်အားနှင့် စိတ်ခံစားမှု သမုဒ္ဒရာများ (ရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်) The power of mindful compassion and the ocean of emotion
၆-၈-၂၀၁၇ မေတ္တာမှတပါး အခြားရွေးစရာမရှိပြီ
၆-၈-၂၀၁၇ မေတ္တာမှတပါး အခြားရွေးစရာမရှိပြီ (အမေး၊ အဖြေ)
၂၅-၁၂-၂၀၁၇ ရောဂါလည်းရှာတတ် ဆေးလဲကုတတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓ (Buddha Knows both Diagnosis and Treatment)
၂၄-၁၂-၂၀၁၇ ည ၇း၃၀ စိတ်ခံစားမှု မျက်လုံးကောင်းအင်အား (The Power of Emotionally Intelligent Eyes)
၂၄-၁၂-၂၀၂၇ သြဝါဒတရားတော် (မြစကြာကျောင်းတိုက်)
၂၃-၁၂-၂၀၁၇ မေတ္တာသုတ်ကသင်ပေးတဲ့ ကလျာဏမိတ္တ (Good Friend as in the Discourse on Metta)
၂၂.၁၂.၂၀၁၇ ည ၇:၃၀ ဇာတ်လမ်းဆုံးအောင် နားထောင်ပါ (Listen to the whole story)
၂၂.၁၂.၂၀၁၇ စုဆောင်းထားတဲ့ပီတိများ � Accumulated Joy
၂၁.၁၂.၂၀၁၇ ရေရှည်အကျိုးအမြတ်အတွက် ပြဿနာမက်လုံး ကရုဏာနှင့် စီးပွားရေးလက်တွဲနိုင်ပုံ ဗုဒ္ဓဒဿနတရားပွဲ သင်တန်း (၁) (Problems as Long Term Incentives for Revenues: A Buddhist Pholosophy Workshop on Mindful Compassion and Business.)
၂၁.၁၂.၂၀၁၇ ရေရှည်အကျိုးအမြတ်အတွက် ပြဿနာမက်လုံး ကရုဏာနှင့် စီးပွားရေးလက်တွဲနိုင်ပုံ ဗုဒ္ဓဒဿနတရားပွဲ သင်တန်း (၂) (Problems as Long Term Incentives for Revenues: A Buddhist Pholosophy Workshop on Mindful Compassion and Business.)
၂၁.၁၂.၂၀၁၇ ရေရှည်အကျိုးအမြတ်အတွက် ပြဿနာမက်လုံး ကရုဏာနှင့် စီးပွားရေးလက်တွဲနိုင်ပုံ ဗုဒ္ဓဒဿနတရားပွဲ သင်တန်း (၃) (Problems as Long Term Incentives for Revenues: A Buddhist Pholosophy Workshop on Mindful Compassion and Business.)
၈.၁၂.၂၀၁၇ ဤခရီးလျစ်လျူရှုချင်လှပါဘိ � The Journey We Wish We Could Ignore
၃.၁၂.၂၀၁၇ အလုပ်ခွင်ထဲကိုကြွတော်မူတဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား � The Buddha Visited the Workplace
၁.၁၂.၂၀၁၇ ပိဏ္ဍပါတ ပစ္စဝက္ခဏာ � ဆွမ်းတစ်လုတ် မည်သို့ဘုန်းပေးရမယ် (Pindapata paccavakkhana � Mindful eating as taught by the Buddha.)
၂၃.၁၁.၂၀၁၇ သက်တော် ၅၃ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် စာပေစကားဝိုင်း အပိုင်း (၁)
၂၃.၁၁.၂၀၁၇ သက်တော် ၅၃ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် စာပေစကားဝိုင်း အပိုင်း (၂)
၂၂.၁၁.၂၀၁၇ အောက်စဖို့ဒ်ဆရာတော်၏ သက်တော် (၅၃)နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကုသိုလ်တော်
(မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး ရှမ်းဘာသာဖြင့်ဟောကြားပေးပြီး ဆရာတော်မှဘာသာပြန်ပေးထားပါသည်။)
၁၈-၁၁-၂၀၁၇ အရာရာ ဆက်နွယ်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲက သတိအခြေခံအလုပ် အပိုင်း(၁) (Mindful Work in the Interconnected World � Part1)
၁၈-၁၁-၂၀၁၇ အရာရာ ဆက်နွယ်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲက သတိအခြေခံအလုပ် အပိုင်း(၂) (Mindful Work in the Interconnected World � Part2)
၁၈-၁၁-၂၀၁၇ အရာရာ ဆက်နွယ်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲက သတိအခြေခံအလုပ် အပိုင်း(၃) (Mindful Work in the Interconnected World � Part3)
၆.၁၁.၂၀၁၇ မိမိကိုယ်ကို သနားကြင်နာနိုင်ပါစေ � Be Compassionate and King to Yourself
၃၀.၁၀.၂၀၁၇ ဒုက္ခအသေအချာကြည့်ပြီး ဗုဒ္ဓအကောင်းမြင်ဝါဒ ရရှိလာခဲ့တယ် (စင်္ကာပူ)
၂၈.၁၀.၂၀၁၇ လောကဓံတုန်လှုပ်မှု နှင့် ကရုဏာတုန်လှုပ်မှု ကွာခြားပုံ (စင်္ကာပူ)
၂၀၁၇ (အမေးအေဖြ) ၃။ ပရိတ်ရွတ်တာနဲ့ ပုတီးစိပ်တာ ဘယ်လိုများ ကွားခြားပါသလဲ
၂၀၁၇ (အမေးအေဖြ) ၁။ ပရိတ်တရားတော်များ ရွတ်ဆိုပူလျှင် သိသင့်သောအချက်များ
၂၀၁၇ (အမေးအေဖြ) ၂။ ပရိတ်တရားတော်များကို ဆရာတော်များနှင့်အတူ ရွတ်ဆိုပူဇော်ရန်သင့်မသင့်
၁၉-၁-၂၀၁၆ ပရိယတ္တိအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း တရားတော်
၃၀-၁-၂၀၁၆ emotion management and mindful compassion (အပိုင်း ၁)
၃၀-၁-၂၀၁၆ emotion management and mindful compassion (အပိုင်း ၂)
၃၀-၁-၂၀၁၆ emotion management and mindful compassion (အပိုင်း ၃)
၃၀-၁-၂၀၁၆ emotion management and mindful compassion (အပိုင်း ၄)
၃၁-၁-၂၀၁၆ နံနက် emotion management and mindful compassion
၃၁-၁-၂၀၁၆ နေ့လည် emotion management and mindful compassion
၂၄-၁-၂၀၁၆ မြေသစ်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာပြန့်ပွားမှု၊ အာဖရိကတိုက်၊ လက်တင် အမေရိကတိုက်၊ ယခင် ယူဂိုဆလားဗီးယားနိုင်ငံများမှ ဗုဒ္ဒဘာသာများအကြောင်း
၇-၂-၂၀၁၆ Shan State Buddhist University ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဖွင့်ပွဲ
11-2-2016 Diagnosis and Treatment For Moody Mind (ဆေးတက္ကသိုလ်-၁၊ ရန်ကုန်)
၁၅-၂-၂၀၁၆ စိတ်ချမ်းသာမှု ဘယ်မှာ ရှိသလဲ
၁၇-၂-၂၀၁၆ နိုင်ငံခြားသာသနာပြု ဘာကြောင့်လိုသလဲ
၂၆-၃-၂၀၁၆ ပျော်ရွှင်မှုအကြောင်း တရားတော်
၈-၆-၂၀၁၆ စိတ်ဖြင့် စိတ်ချမ်းသာမှုဆေးဝါးထုတ်လုပ်ပါ တရားတော် Let the mind produce happiness medicine
28-10-2016 Mindfulness and emotions management in daily life
29-10-2016 Mindfulness and emotions management in daily life (Workshop - Session 1)
29-10-2016 Mindfulness and emotions management in daily life (Workshop - Session 2)
29-10-2016 Mindfulness and emotions management in daily life (Workshop - Session 3)
29-10-2016 Mindfulness and emotions management in daily life (Workshop - Session 4)
30-10-2016 OBVS 8th Kathina Robe Offering Ceremony
၁-၁၁-၂၀၁၆ ပျော်ရွှင်မှုခလုပ် ဘယ်မှာလဲ တရားတော်
၃-၁၁-၂၀၁၆ သာမည ဖလသုတ် သင်တန်း (၁)
၃-၁၁-၂၀၁၆ သာမည ဖလသုတ် သင်တန်း (၂)
၃-၁၁-၂၀၁၆ သာမည ဖလသုတ် သင်တန်း (၃)
၃-၁၁-၂၀၁၆ သာမည ဖလသုတ် သင်တန်း (၄)
၇-၁၁-၂၀၁၆ ရေကြည်မြို့ တရားပွဲအတွက် အဝေးရောက် နှုတ်ခွန်းဆက်
၁၂-၁၁-၂၀၁၆ ဓမ္မစကြာ အကျယ် ရှင်းတမ်း သင်တန်း (၁)
၁၂-၁၁-၂၀၁၆ ဓမ္မစကြာ အကျယ် ရှင်းတမ်း သင်တန်း (၂)
၁၃-၁၁-၂၀၁၆ ဓမ္မစကြာ အကျယ် ရှင်းတမ်း သင်တန်း (၃)
၁၃-၁၁-၂၀၁၆ ဓမ္မစကြာ အကျယ် ရှင်းတမ်း သင်တန်း (၄)
၁၉-၁၁-၂၀၁၆ ဓမ္မစကြာ အကျယ် ရှင်းတမ်း သင်တန်း (၅)
၂၇-၁၁-၂၀၁၆ ဓမ္မစကြာ အကျယ် ရှင်းတမ်း သင်တန်း (၆)
၂၇-၁၁-၂၀၁၆ ဓမ္မစကြာ အကျယ် ရှင်းတမ်း သင်တန်း (၇)
၂၇-၁၁-၂၀၁၆ ဓမ္မစကြာ အကျယ် ရှင်းတမ်း သင်တန်း (၈)
၂၇-၁၁-၂၀၁၆ အနတ္တလက္ခသုတ္တံ ရှင်းတမ်း သင်တန်း
27-11-2016 Lunch Offering
12-11-2016 Message for IABU (International Association of Buddhist Universities) Conference (1)
12-11-2016 Message for IABU (International Association of Buddhist Universities) Conference (2)
၂၀-၁၁-၂၀၁၆ စင်္ကာပူနိုင်မှ ပရဟိတ ဝန်ဆောင် သူများအတွက် မုဒိတာကမ္မဋ္ဌာန်း တရာတော်
28-11-2016 Turning negative Emotions into friend through mindfulness compassion (1)
5-12-2016 Turning negative Emotions into friend through mindfulness compassion (2)
၃-၁၂-၂၀၁၆ International Association of Buddhist Universities ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ရှင်းတမ်း
၃-၁၂-၂၀၁၆ အမေး အဖြေ
၃-၁၂-၂၀၁၆ Inner peace and job satisfaction (MICT Park မှ ဝန်ထမ်းများ အတွက်) (၁)
၃-၁၂-၂၀၁၆ Inner peace and job satisfaction (MICT Park မှ ဝန်ထမ်းများ အတွက်) (၂)
4-12-2016 Explanation about chanting book
၉-၁၂-၂၀၁၆ လုပ်ငန်းခွင် အသုံးချသတိပဌာန် တရားတော် Mindfulness Practice At Work
ကရုဏာအသိဖြင့် စိတ်ခံစားမှု ဖွံ့ဖြိုးစေရေး သင်တန်း
၁၀-၁၂-၂၀၁၆ နှလုံးသားထဲမှ ရင်သွေးနှင့် ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ခြင်း Reconciling With The Inner Child (Mandalay)
၁၁-၁၂-၂၀၁၆ နှလုံးသားထဲမှ ရင်သွေးနှင့် ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ခြင်း Reconciling With The Inner Child (Mandalay)
၁-၆-၂၀၁၅ ပျော်နိုင်ပါရက်နဲ့ ပျော်ဖို့ မေ့နေကြသူများ Why Forgetting To Be Happy
၂-၆-၂၀၁၅ အနက်ရောင်ကို အဖြူရောင်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း တရားတော် Transforming pain into compassion
၃-၆-၂၀၁၅ လစ်လျူမရှု ကျောမခိုင်းသော ဥပက္ခာတရား Minful and balanced emotion
၂၅-၇-၂၀၁၅ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး အဆိပ်မဖြစ်အောင် စားကြစို့ ၂၅-၇-၂၀၁၅ (စင်ကာပူ)
Buddhist way of eating that is not toxic 25-7-15 (Singapore)
၁။ အမေး အဖြေ (၁) ၂၅-၇-၂၀၁၅ (စင်ကာပူ)
၂။ အမေး အဖြေ (၂) ၂၅-၇-၂၀၁၅ (စင်ကာပူ)
၃။ အမေး အဖြေ (၃) ၂၅-၇-၂၀၁၅ (စင်ကာပူ)
၄။ အမေး အဖြေ (၄) ၂၅-၇-၂၀၁၅ (စင်ကာပူ)
၁။ အမေး အဖြေ (၁) ၂၅-၇-၁၅ (စင်ကာပူ)
၂။ အမေး အဖြေ (၂) ၂၅-၇-၁၅ (စင်ကာပူ)
၃။ အမေး အဖြေ (၃) ၂၅-၇-၁၅ (စင်ကာပူ)
၄။ အမေး အဖြေ (၄) ၂၅-၇-၁၅ (စင်ကာပူ)
၅။ အမေး အဖြေ (၅) ၂၅-၇-၁၅ (စင်ကာပူ)
၂၂-၈-၂၀၁၅ ပီတိဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်း တရားတော်
၂၃-၈-၂၀၁၅ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ အာဟာရ ဖြစ်စေသော အကြောင်း တရားတော်
၂၅-၈-၂၀၁၅ အလုပ်ခွင်မှာ ပျော်ရွှင်စေတဲ့ အလုပ် သတိပဋ္ဌာန် ဘာဝနာ တရားတော်
၂၄-၁၂-၂၀၁၅ လူ့လောကအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ကထိန်သင်္ကန်းကပေးတဲ့ စံနမူနာ တရားတော်
၂၄-၁၂-၂၀၁၅ (၁) တရားဦး ဓမ္မစကြာ အခြေခံ ဟောပြော ဆွေးနွေးပွဲ
၂၄-၁၂-၂၀၁၅ (၂) တရားဦး ဓမ္မစကြာ အခြေခံ ဟောပြော ဆွေးနွေးပွဲ
၂၄-၁၂-၂၀၁၅ (၃) တရားဦး ဓမ္မစကြာ အခြေခံ ဟောပြော ဆွေးနွေးပွဲ
၂၆-၈-၂၀၁၅ ဂရုဏာနှင့်ပညာ-ထေရ၀ါဒနှင့်မဟာနဗုဒ္ဓတို့ဧ။်တူညီသောကျင့်စဉ် Compassion and Wisdom, The Twin Pillars of Therarada and Mahayana Buddhists
၂၆-၈-၂၀၁၅ ရုဏာနှင့် ပညာ = ထေရဝါဒနှင့် မဟာယန ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ တူညီသော ကျင့်စဉ် တရားတော်
၂၀၁၅ ဘဝအရည်အသွေးကို သုံးသပ်ခြင်း
၉-၃-၂၀၁၂ ဓမ္မမျက်လုံးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု မျက်လုံး (သီပေါမြို့၊ မြို့လည် ဘုရားကျောင်း)
၁၀-၃-၂၀၁၂ ၂၆၀၀ ပြည့် ဓမ္မစကြာသုတ် (သီပေါခရိုင်၊ နမ့်လန်းမြို့၊ မြို့လည်ကျောင်း)
၁၂-၃-၂၀၁၂ အကောင်းဘက်တွေးခေါ်တတ်မှု Positive Thinking (မူဆယ်မြို့၊ မဟာဝန်ကျောင်း)
၁၆-၃-၂၀၁၂ နှစ် ၂၆၀၀ သက်တမ်းရှိ စိတ်ဖိစီးမှုဝေဒနာ လျှော့ချနည်း (လားရှိုးမြို့၊ သီရီမင်္ဂလာ မန်ဆူ ရှမ်းကျောင်း)
၁၇-၃-၂၀၁၂ ၂၆၀၀ ပြည့် သစ္စာတရားခရီးစဉ် 2600 years Journey of Truth (မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေ ပေါင်းလဲ ဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီး)
၁၇-၃-၂၀၁၂ ၂၆၀၀ ပြည့် သစ္စာတရားခရီးစဉ် 2600 years Journey of Truth
၁၈-၃-၂၀၁၂ တိုင်းပြု ပြည်ပြု မင်္ဂလာ တရားတော် (တောင်ကြီးမြို့၊ ပိဋိကတ် ရှမ်းဘာသာပြန်ကျောင်းတိုက်)
၂၁-၃-၂၀၁၂ ကောင်းဘက်တွေးခေါ်တတ်မှု Positive Thinking (လွိုင်လင်မြို့၊ ဓါတ်တော်ကျောင်း)
၂၄-၃-၂၀၁၂ ခန္ဓီ = နှစ်၂၆၀၀ပြည့် ဗုဒ္ဓ၏ သာသနာပြု လမ်းစဉ် (ရန်ကုန်မြို့၊ ရွှေတိဂုံအရှေ့ဘက်မုဒ်၊ မင်္ဂလာဈေးဓမ္မာရုံ)
15-5-2010 Meditation As Psychology Skill (Singapore)
၁၉-၁၂-၂၀၀၆ အခြေခံသတိပဌာန်လုပ်ငန်းနှင့် ခေတ်သစ်စိတ္တဗေဒ တရားတော် The-use-of-meditative-awareness-to-improve-our-psychological-well-being
၁၅-၁၂-၂၀၀၂ နေ့စဉ်ဘ၀အရည်အသွေးကိုသုံးသပ်ခြင်း (Singapore)
15-12-2002 Buddhist Reflection Of Quality Of life (Singapore)